Ny fidiram-bolan'ny App Store sy Google Play dia niatrika fiakarana mahatalanjona nandritra ny taona lasa | Vaovao momba ny gadget
Ny fidiram-bolan'ny App Store sy Google Play dia niatrika fiakarana mahatalanjona nandritra ny taona lasa
Nandritra ny fotoana vitsivitsy izao, maro ireo mpamorona fampiharana izay manokana ny fotoana feno amin'ny famoronana rindranasa amin'ireo magazay roa manan-danja indrindra amin'ny panorama ankehitriny: Google Play sy ny Apple App Store. Apple dia niavaka hatrany tamin'ny fitsaboana ireo mandroso amin'ny fomba mahafinaritra ary tsy i Apple no nilaza azy, fa ny mpamorona fampiharana sy lalao ihany isan-taona, dia manohy matoky ny sehatry ny Apple mihoatra ny an'i Google, asehon'ny vola miditra. tarehimarika azon'izy ireo ireo sehatra manjaka isan-karazany eo amin'ny tsena.
Amin'ny lafiny iray, afaka jerentsika ny fomba nanombohan'ny App Store tamin'ny fidirana 3.400 tapitrisa dolara tamin'ny 2015 ka hatramin'ny 5.400 tapitrisa novina tamin'ny taona lasa, izay midika hoe fitomboana 60% raha oharina tamin'ny tamin'ny taon-dasa. Na izany aza, Google Play dia nitombo 82%, lasa hatramin'ny nidirana 1.800 tapitrisa dolara tamin'ny 2015 lasa 3.300 tapitrisa dolara tamin'ny taon-dasa, tarehimarika izay tsy ratsy velively fa manamafy fa ny magazay fampiharana Apple no mbola tian'ny mpamorona fampiharana.
Amin'ity fanadihadiana navoakan'ny SensorTower ity dia afaka manamarina ihany koa izay ireo rindranasa izay niteraka fidiram-bola betsaka indrindra amin'ny teny ankapobeny amin'ny fivarotana rehetra miaraka. Ao amin'ny App Store, Spotify, mpifaninana lehibe indrindra amin'ny Apple Music, no mitana ny laharana arahin'ny Netflix, Line, Pandona ary HBO Now. Saingy, ao amin'ny Google Play, tsy mahita Spotify ho iray amin'ireo rindranasa nampisy fidiram-bola betsaka indrindra izahay, saingy io dia Line, arahin'ny Tender, Pandora, HBO Now ary Line Manga. Mba hanaovana an'io fanasokajiana io dia nesorina daholo izay rehetra azo raisina ho lalao, ary mety ho i Clash Royale no solontena ambony indrindra amin'ny sehatra roa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » Ny fidiram-bolan'ny App Store sy Google Play dia niatrika fiakarana mahatalanjona nandritra ny taona lasa
Ny Sony Xperia Z5 dia efa manomboka manavao ny Android 7 Nougat
Hevitra vaovao momba ny fomba mety hahatonga ny iPhone 8